PHYTOPHTHORA ON YAANYADA: SIDA LOO WAJAHO CUDUR FUNGAL AH - BEER CAGAARAN
Marka laga helayo calaamadaha phytoftoras ee goobta, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu bilaabaa in uu dhawaaqo dhawaaqa. In maqaalka ah waxaan ka sheekeyn doonaa wax kasta oo la xiriira cudurka iyo sida loola dagaallamo dillaac on yaanyada ee lagu koriyo iyo berrin bannaan.
Waa maxay phytophthora: sababaha iyo calaamadaha cudurka
Haddii aadan la kulmin duufaanka oo aanad garanayn waxa ay tahay, markaa, waxay u badan tahay, inaadan isku dayin inaad korto beertaada. Phytophthora waa cudurada ugu khatarta badan ee dhirta, taas oo ay sababto phyus phytophorosis, taas oo macnaheedu yahay "geedka cunaha" af Ingiriis. Iyadoo horumarin degdeg ah, waxay burburin kartaa dalagga yaanyada dhawr maalmood gudahood.
Marka hore, infekshanku wuxuu ku fidaa baradho, kadibna wuxuu u wareegaa yaanyada. Sidaa darteed, mid ka mid ah sababaha infekshanku waa u dhowaanshaha baradhada. Caabuqa wuxuu u dhacaa sababtoo ah qoyaan badan, isbedel hoose ama isbeddel deg deg ah ee heerkulka, la'aanta iftiinka qorraxda, dhirta dhirta yaryar iyo dhererka nitrogen.
Mid ka mid ah arki karaa muuqaalka muuqaalka phytophtoras on dhirta August iyo July. Wakhtigan, maalintaa weli waa kulul, habeenkii waa hore u qabow, subaxna waxaa jiraa dhar badan, uumiga oo si tartiib tartiib ah u dhaco, gaar ahaan geedo digaagsan. Xilligan waa midka ugu fiican ee horumarinta phytophthora.
Calaamadaha phytoftora on yaanyada
Calaamadaha ugu horreeya ee phytophthora on yaanyada, dhibco madow ayaa marka hore la sameeyay on caleemaha, ka dibna midhaha u xanuunsado, iyo ka dib iyaga asliga ah ayaa sidoo kale saameeyey. Dhibbo madow ah oo caleemo ah oo ku yaala roobka ayaa la daboolay barar yar oo iftiin leh - tani waa fungus. Florescences ee yaanyada si dhakhso ah u noqdaan huruud, ka dibna madow iyo dhaco. Miro ayaa la daboolay raadad madow-cawlan, kaasoo jilicsan waqti dheer. Geedka waxaa lagu daboolay dhibco madow. Cudurku si dhakhso ah ayuu u joojiyaa baadiyaha, taas oo keenta dhimashada geedka.
Phytophthora: sida si habboon u maareeyaan yaanyada dhulka hoostiisa
Tamaandho kuwaas oo ku koreen dhul furan ayaa intooda ugu badan cudurkan. Sidaas darteed, si aan dhibaatadan loo wajahin, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo ka hortagga khasabka ah.
Aan aragno sida loo ilaaliyo yaanyada laga bilaabo phytophthora. Si aan ugu ordo iyada beertaada, Waa inaad raacdaa xeerarka soo socda:
Infekshanku wuxuu ku dhacaa duurka dhallinyarada sababtoo ah ciidda aan la daaweynin, markaa hubi inaad ka baxdid cawska sariiraha beerta oo aadan beeranin yaanyada ka dib baradho iyo dalagyo kale oo sidoo kale u nugul phytophthora.
Ha dhigin duurka si aad u dhow midba midka kale, sida sanadka qoyan ee tani waxay dhalin doontaa horumarinta phytophtoras.
Waraabinta tamaandhada waa in ay ahaataa kaliya xididka, sida biyaha caleemaha u keeni karo cudur.
Goobta yaanyada sii kordhaya waa inay doortaan si wanaagsan.
Ha ku dhaafin xadiga of bacriminta nitrogen codsatay.
Haddii aad ka hortagtid in cudurku uusan shaqeyn, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loola tacaalayo yaanyada yaanyada. Waa wax aan macquul aheyn in laga takhaluso, maadaama cudurka uu ka kaco hal baadiyaha si kale oo isla markiiba u muuqda dhirta dhowr ah. Waxyaabaha ugu horreeya ee lagu sameeyo xaaladdan waa in lagu kala saaro duurka ay saameeyeen kuwa caafimaadka qaba. Waxay u fiicnaan laheyd inay iyaga rarto oo si dhakhso ah u gubto si looga hortago inay faafaan. Haddii phytoftora ay ku dhufato tiro badan oo duurka, ka dibna waxaa loo baahan yahay walxo kiimiko ah.
Marka dabaylo goor dambe ah ee daaweynta yaanyada waxaa lagu sameeyaa diyaargarowga qaabka budada ah, kuwaas oo lagu qasi karo biyo iyo lagu buufin dhirta. Kuwa ugu waxtar leh iyaga waa boric acid, "Gamar", "Fitosporin".
Sida loo ilaaliyo yaanyada laga bilaabo phytophthora ee lagu koriyo
Hawo joogto ah iyo uumiga qoyaan waa xaalado aad u daran ee yaanyada sii kordhaya ee lagu koriyo. Qolkani, inkastoo dhirta ay u badantahay in ay saameyn ku yeelan karto cudurada (ma jiro il toos ah ee caabuq), laakiin haddii ay taasi dhacdo, faafitaankoodu waa mid aad u daran. Si looga hortago burburinta tamaandhada by phytophthora, waa in lagu koriyo oo si joogto ah loo duubo oo u waraabiyo duurka, marar dhif ah, laakiin badan.
Ma taqaanaa? Si looga hortago yaanyada in ay jiradaan, tallaabooyin ka hortag ah waa in la qaataa xitaa ka hor beerashada, daaweynaya abuurka leh xal diirran oo ah kiniinka potassium 20 daqiiqo.
Su'aal aad u muhiim ah ayaa ah sida loo buufiyo yaanyada laga bilaabo phytophtoras, maadaama badan oo kiimikooyin ay ka dhigi karaan sunta maskaxda iyo habboonayn isticmaalka. Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro daaweynta, waxaad u jabi kartaa baadiyaha naftooda, iyaga oo u horseedaya inay qudhuntaan. Si aan u waxyeeleynin dhirta, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo yareeyo yaanyada cudurada.
Tallaabooyin ka hortag ah, waxaa lagama maarmaan ah in biyo yari la nadiifiyo xal sulfamer ah toddobaad gudihiis ka dib markii la beero. Ka dib shan maalmood ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo ay duurka leh decoction of horsetail, ka dib markii caleemaha lagu buufin leh potassium iodide lagu qasi jiray biyo. Iyo shan maalmood ka dib, dhirta waxaa lagu daaweeyaa Epin.
Wixii daaweynta prophylactic, xal ka soo cagaaran acidic of 2 l, galaas oo ash iyo hal qaaddo malab baaldi biyo ah ku haboon noqon doonaa. Xalkan waxaa lagu buufiyaa duurka toddobaad kasta. Waqtiga ugu wanaagsan ee habraacyada oo dhan waa qeybta hore ee maalinta.
Si looga fogaado sababaha horumarinta phytophthora ee lagu koriyo, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro boodhka iyo qoryaha, ilaaliyaan nadiifinta gudaha qolka.
Daaweynta Phytoftora ee yaanyada
Haddii ay jirto fytophthora on yaanyada, ka dibna loogu talagalay bannaanka u badan su'aasha waxay noqonaysaa sida loo maareeyo karbaashkan. U diyaargarowga daaweynta phytophthora laba siyaabood:
isticmaalka walxaha kiimikada firfircoon;
iyadoo la adeegsanayo daaweynta dadweynaha.
Waa muhiim! Marka la daaweynayo daaweynta fytoftoras ee yaanyada, waxay la wadaagaan cunto warshad ah oo xoojiya nidaamka difaaca.
Marka daawada phytophthora ee yaanyada lagu daaweeyo kiimikada sida "Alirin-B", "Gamar", "Baikal EM-1". Daaweyn kale oo wax ku ool ah waa dareeraha Bordeaux.
Sidee loola tacaali karaa hababka dadku xumaadeen
Waxaan ku taxluuqa ugu badan dawooyinka dadka ka soo phytophtora on yaanyada:
Tincture of toon leh kaneecada kaneecada. Waxaad u baahan doontaa 100 g oo toon ah oo la kariyey ee Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah, kaas oo lagu shubay galaas biyo ah oo ka tagay 24 saacadood. Maalin ka dib, shaandhada iyo walaaqaya 10 litir oo biyo ah iyo 1 g oo ah kaneecada kaneecada. Daadi duurka u baahan todobaadkii kale.
Whey Marka lagu daro 1: 1, xayawaanka waxaa lagu qasi karaa biyo iyo yaanyo loola dhaqmo laga bilaabo Julaay maalin kasta.
Ash. Toddobo maalmood ka dib marka la furo oo la sameeyo miro, ash ayaa lagu buufiyaa inta u dhaxaysa safarka ka hor waraabinta.
Tincture of caws buufin ama hay. Waxaad u baahan tahay 1 kg oo ah khudaar si aad ugu shubtid 10 litir oo biyo ah, ku dar muggeed oo Hure ah oo ka bax fasax 3-4 maalmood. Muddo ka dib, cadaadis iyo geedi socodka duurka 1.5-2 usbuuc.
Iodine oo caano leh. Waxay qaataan 10 litir oo biyo ah, 1 litir oo caano ah oo aan caan ahayn, 15 dhibcood oo iodine ah, oo wax waliba isku daraan oo ay geedi socodsiiyaan duurka labadii toddobaadba mar.
Cusbo cusbo Hal koob oo cusbo ah, qaado baaldi biyo ah oo geedi socodka miraha cagaaran ku bilawdo bishiiba mar.
Xalka barafka sulfate. On baaldi 10 litir oo biyo ah ku dar 2 tbsp. l copper sulfate iyo xalka ka dhaliyey waraabiyey geedka.
Khamiis 10 litir oo biyo ah ayaa u baahan 100 g oo khamiir ah. Daawee geedka marka daawada phytophthora u muuqato.
Kala soocida xididdada geedo leh silig naxaas ah ka hor intaan la beeriin ama daloolin afkoda yaanyada. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu kululeeyo xadhigga naxaasta ah iyo jarjar afar jibbaar ka dibna googoynaya asliga ah 10 cm oo dhulka hoostiisa ah, geli siligga kuna dhaji cadaadiska.
Dagaalka ka dhanka ah dabaylo goor dambe on yaanyada leh daaweynta dadweynaha waa sida waxtar leh sida halganka wakiilada kiimikada.
Ma taqaanaa? Copper sulfate waxay kaa caawin kartaa in laga takhaluso phytophthora, laakiin waa khatar aad u caleemo. Dhamaan dhibcaha xalka ayaa gubi kara geedka, ka dibna ay u dhiman karto.
Noocyo yaanyo u adkaysta Phytophthora
Nasiib darro, ma jiraan noocyo yaanyo ah oo si buuxda ugu adkaysanaya phytophthora. In kasta oo ay kala duwan yihiin kala duwan, waxaa jira wax yar oo ka badan adkaysi u yaanyada cudurka.
Wixii sii kordhaya ee xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo waa noocyo badan oo ku habboon ee noocyada go'aamiyey. Way yar yihiin, horaantii iyo soo goosashada wanaagsan.
Xaddidan Yaanyo Noocyo ah:
Awliyo - dhirta farsameysan oo leh cabbirka miro ilaa 0.8 kg.
Miro - miro guduudan oo qiyaastii ilaa 0.1 kg.
Perseus - yaanyada cas ee foomka wareega ah.
Dhibcaha - yaanyada lafdhabarta leh oo miisaankoodu yahay ilaa 0.3 kg.
Mucjiso cagaaran - miraha midab-ba'an ayaa hoos udhacay, oo leh heer sare oo ah beta-carotene.
Noocyada aan kala sooca lahayn waxaa lagu gartaa miraha dheer iyo kuwa waaweyn. Waxay ku kori karaan labada koriyo iyo dhulka furan. Waa shardi u ah horumarkooda caadiga ah inay haystaan ​​pasynkovaniya.
Waa muhiim! Markaad ku kobcinayso noocyo aan caadi ahayn beerahooda, waa in ay ku xiran yihiin xarumaha sare, tan iyo asliga ugu weyn ee jebin karaa miisaanka culus ee yaanyada.
Noocyo badan oo adkaysi u leh noocyada aan caadiga ahayn waa:
De Baro. Tamaandhada qaabka kareemka oo culayskiisu yahay 80 g
Kala duwanaanta cagaarka ayaa leh jilcyo cagaaran, oo la mid ah qaraha. Miraha miisaankeedu yahay 0.1 kg.
Sirdoonka Hooyo. Miraha casaanka ah waa mid aad u macaan, miisaankeedu yahay ilaa 1 kg.
Wadnaha Dragon Miraha of a miraha raspberry-cas oo leh asal fareeshka ah oo miisaamaya ilaa 0,8 kg.
Kahortaga daawada phytophthora
Ilaalinta tamaandhada ee phytophthora ayaa ka caawin doonta daryeelka saxda ah. Daryeelka waxaa lagu sameeyaa iyada oo ku xidhan nooca horumarka, taas oo ah, marka loo eego, waxa loo qaybiyaa wax soo saar iyo qudaar.
Marka habka dhirta ee dhirta sii kordhaya si dhakhso ah u koraan, laakiin miraha waxaa loo sameeyay si tartiib ah. Iyo sababta oo ah formation of miro late, gaar ahaan xagaaga roobaadka, phytophthora ma qaadan doono waqti dheer si ay u yimaadaan. Si looga hortago, waxaad u baahan tahay inaad qabato pasynkovanie. Tani waxay hubin doontaa in wareegga hawada ee kor loo qaado iyo in la dedejiyo koritaanka midhaha.
Marka habka wax soo saarku yahay mid fruiting firfircoon. Tiro badan oo yaanyo ah baadiyaha u horseedaa xaalad walaac ah oo ka mid ah dhirta, taas oo yareeysa iska caabida. Si looga hortago dhacdada phytophthora, waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo tirada yaanyada on baadiyaha. Waqtiga aan fiicnayn, waxaa wanaagsan in la yareeyo tirada miraha iyo ka saarida burooyinka curiferka ah. Sidaas waxaad xaqiijin doontaa Bisaylkiisa degdeg ah iyo kordhiyo iska caabbinta dhirta cudurada. Si looga hortago dhacdada phytophthora ee cimilada roobka, xitaa dalagga qaangaarka ah ayaa laga goyn karaa, tani waxay ka caawineysaa dhirta si ay ula dagaallanto cudurka.
Sida loo badbaadiyo oo u baabbi'iso yaanyada saameynaya
Tamaandhada oo horey u qabay phytophthora waxaa lagu keydin karaa daaweynta kulaylka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto biyo 60 ° C qaboojiyaha isla markaana hoos u dhig miro la saameeyey. Ka taxadar: yaanyada waa in ay kululaan oo aan karin. Marka biyaha qaboojiyo, ku dar mid cusub ilaa yaanyada si buuxda u kululeyn. Ka dib markii daaweynta biyaha, yaanyada la qalajiyey oo lagu meeleeyay meel gudcur ah ama on windowsill for Bisaylkiisa. Inta lagu jiro kuleylka, xanuunka phytophthora u dhinta, ka dibna yaanyada la cuni karaa. Waxay kaloo noqon karaan qasacadaysan. Marka lagu guul dareysto miraha si ay u saameyn ku yeeshaan kuleylka kuleylka ah, ma caawin doono, waana in la isticmaalo.
100% ka-qaadista phytoftora ma dammaanad qaadi karto mid ka mid ah siyaabaha. Si kastaba ha ahaatee, si looga hortago dhacdada cudurka iyo la dagaallama faashad goor dambe ee yaanyada ayaa ku jira awooddaada. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad u hoggaansamaan dhammaan talooyinka kor ku xusan, si ay u fuliyaan tallaabooyin ka hortag ah, ka dibna waxaad heli doontaa dalag ballaaran oo yaanyo caafimaad leh.